Galkacyo oo deggan iyo wadahadallo lagu soo afjarayo iska-horimaadkii shalay oo socda. – Radio Daljir
Oktoobar 30, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Oct 30 – Xaaladda magaalada Galkacyo ayaa maanta aad u deggan kadib markii maalintii shalay ahayd uu suuqa weyn ee Galkacyo uu ka dhacay iska-horimaad dad ku dhintay kuwo kalana ay ku dhaawacmeen.
Isku socodka dadka iyo gaadiidka dhinacyada magaalada ayaa caadi meelo badan ku soo laabtay gaar ahaan nawaaxiga suuqaasi oo ahayd meelihii shalay cabsidu ka jirtay, hase ahaatee waxaa gabi ahaanba maanta xirnaa goobihii ganacsiga ee suuqaasi ku dhax-yaallay.
Dadka wax ku iibsada suuqaasi oo ay idaacadda Daljir maanta wax ka weydiisay sababaha xirnaasha suuqaasi ayaa sheegay in ay jiraan dhowr arrimood oo is biirsaday oo midi tahay iyadoon wali xal laga gaarin is maandhaafkii shalay ka dhacay suuqaasi ee dhaliyey iska-horimaadka dad ku dhintay kuwo kalana ku dhaawacmeen, waxaana ay sidoo kale sheegeen sababaha xirnaashaha in ay ka mid tahay maanta oo ah maalin Jimce ah oo dadku ay shaqooyinka ka nastaan.
Ganacsatadu waxay Daljir u sheegeen in aysan jirin wax dareen colaadeed ah oo ay haatan ka walwal qabaan, isla markaana xilli dhow shaqada suuqaasi ay si rasmi ah u bilaaban doonto.
Dhanka kale waxa socda wada-hadallo gooni-gooni ah oo ay yeelanayaan maamullada ka jira magaalada, kuwaasi oo lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisaddii ka dhalatay iska-horimaadkii shalay ka dhacay suuqa weyn ee magaalada Galkacyo, wada-hadalkaasi oo ay qayb ka yihiin waxgaradka iyo culimo aw-diinka kala duwan ee gobolku.
Mas?uuliyiinta maamulka Puntland ee gobolka Puntland iyo kuwa maamulka koonfurta gobolka Mudug oo ay la xiriirtay idaacadda Daljir, ayaa sheegay in ay ka go?an tahay sidii ay u hirgalin lahaayeen waxkasta oo horseedi kara nabad iyo wada noolaansho.
Galabta ayaa lagu wadaa xarunta dawladda hoose ee magaalada Galkacyo in uu ka dhaco shir ballaaran oo ay ka soo qayb gali doonaan mas?uuliyiinta maamulka Puntland ee gobolkan ku sugan iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ah, shirkaasi oo looga arrinsan doono nabadda iyo wada noolaanshaha dadyowga ku dhaqan magaalada Galkacyo.
112 jir ku guursaday Guriceel gabadh 17 jir ah oo uu ka waynyahay 95 sano.